Fikojakojana ny ranon'aina mangatsiaka ny tsiranoka China Manufacturer
Description:Mendrika an-dry zareo ny Cpu mangatsiaka,Mafy ve ny zava-mahadomelina mba hihazonana?,Fanginana mangatsiaka ihany no resahina
Home > Products > Fiarovana amin&#39;ny fluoro-karbônina > Kofehy ho an&#39;ny Data Center Server > Fikojakojana ny ranon&#39;aina mangatsiaka ny tsiranoka
Fikojakojana ny ranon'aina mangatsiaka ny tsiranoka
Model No.: TUWF-6106
ny fiovan'ny fizotran'ny rano mihena ny rano mangatsiaka ampiasaina amin'ireo mpizara ivotoerana data dia tsy mila fampangatsiahana rivotra.
izay mampihena be ny fanjifana fahefana amin'ny efitrano informatika.
Ny mampiavaka ny takelaka dielectric :
* Solon'ny fluoroida Mamelatra ny lozisialy ho an'ny serivisy data Center ary afaka ampiasaina betsaka amin'ny fotoana famonoana hafanana mifehy ny hafanana;
* Ny fluorocarbon dinganina mangotraka mihena kely dia malefaka amin'ny antonony. Misy ny fanalefahana amin'ny alàlan'ny fiasa, izay manafana ny hafanana amin'ny hafanana amin'ny alàlan'ny hafanana, noho izany dia manome antoka ny fiasan'ny fandroana dia mety miasa tsara sy mafy;
* Ny refluococaren Bahanana dia Ny entana tsy mampidi-doza, tsy azo kitain'afo ary tsy mipoaka, tsy misy kitay ary fipoahan'ny jiro Fluorocarbon Fangatahana;
* Solosaina fanadiovana matihanina dia insulation elektrika tsara Fluorocarbon Refrigerant, fahatapahana herinaratra avo lenta amin'ny 40KV;
* Ny tsy tapaka dielectric ambanin'ny 2 dia tsy manary data very amin'ny rindranasa foibe;
* Ny solon'ny fanadiovana fluide Tsiranoka tsara, ity fahamailoana simika ambany ity noho ny rano mazava; Afaka mikoriana tsara sy manala ny hafanana ao amin'ny rafitra fanaraha-maso ny hafanana;
* Rivotra ho an'ny Data Center Center dia Nontoxic, tsy mampidi-doza, tsy milamina;
* Ny fanakianana ara-tontolo iainana, manana sanda ODP 0 ary ambany ambany amin'ny sandan'ny GWP
Ny marika fizika fizika ny vokatra:
Ity andiany Refrigerant For Data Center Server dia tsy ampiasaina amin'ny rano be amin'ny hafanana mifehy ny mari-pana
rafitra fanalefahana, mety indrindra ho an'ny rohy rehetra an'ny famokarana semiconductor; fa
dia ampiharina amin'ny fomba fitarihan-dronono ho an'ny rafitry ny mpizara solosaina sy ny hatsiaka hafa
ary ny fanaparitahana ny hafanana, toy ny mpamokatra entona rivotra sy ny ao anaty ny set generator, ny
Fitaovana fampirimana amin'ny fantsom-pifandraisana ho an'ny mpanova volt
batterie sy Phased Array Radar sns.
Fonosana coating simika:
Ity andiany andiany ity dia feno miaraka amin'ny 25kg / barika, na natao ho an'ny mpanjifan'ny tsipika manokana.
Fitehirizana entana sy fitaterana:
Ity andiana vokatra ity dia mora mitahiry sy hitaterana entana.
Product Categories : Fiarovana amin'ny fluoro-karbônina > Kofehy ho an'ny Data Center Server
Mangatsiaka tsiro amin'ny solosaina PC laptop Contact Now
Rano mangatsiaka ho an'ny fiara Contact Now
Rano mangatsiaka ho an'ny telefaona Telona Contact Now
Mangatsiaka tsiranoka ho an'ny solosaina karatra sary Contact Now
Mangatsiaka tsiranoka ho an'ny mpizara Threadripper Cpu sy Gpu Contact Now
Mangatsiaka tsiranoka ho an'ny PC Gaming Mining Contact Now
Ny etona mangatsiaka azo antoka ho an'ny Data Center Server Contact Now
Rano mangatsiaka ho an'ny fiara fitaterana angovo vaovao Contact Now
Mendrika an-dry zareo ny Cpu mangatsiaka Mafy ve ny zava-mahadomelina mba hihazonana? Fanginana mangatsiaka ihany no resahina Fihena-drano mangatsiaka Fihenanan-drano mangatsiaka Gpu Moa ve ny setroka mangatsiaka? Fihenan-tsakafo mangatsiaka Rehetra ao anaty rano mangatsiaka tokana